EBBAA BARNOOTA OL-ANNNOO BARA 2015 -
EBBAA BARNOOTA OL-ANNNOO BARA 2015
bilisummaa July 26, 2015	Leave a comment
Baraa kana jechuun baraa 2015 kessaa unveristiin biyyaa Ethiopia martuu haala hin baraamnen Ejejjaa , Motummaa wayyaanettin osoo barattoon KORSII FI RISAARCH hin xumuriin fi hin dhiyyeesin , akka ebbifaaman godhamee . Unveristiin hunduu guyyaa tokko karoorra isaanii malee akka ebbisaanif Dirqamaa Hogaantootaa Wayyanee irraa itti laatame . dhibummaa kanaan ; Ebbii baraattota Unversitti hundaa guyyaa tokko , guyyaa 27 /10 /07 A .L.H Ebbisaanif dirqaamni itti laatame . Dirqaamichaa galmaan gahuuf hunduu guyyummaa kana ebbisee ; unversity Finfinee irraa kan hafee jechuu kottii . Finfinee garuu torbee wal ta’iinsi eebbaa unversity hundaa eebbisanitti ebbisee . Sabaaba Ebbichii murtiin Guyyaa tokko itti argateef , kan armaan gaditti .midhaan mottummaan Wayyanee , baraattota irraan ga’aa turtee fi ga’aa jirtuu heduu dha . kessaa muraasni isaani
1 Baraattota mirgaaf Hirirraa bahaan Rasaassaan alatti hambisuu.
2 Unveristiin irraa ari’uu .
3 Hidhuu fi qabdee dhoksuu .
4 Hojji qacaruun hafee jireenyaf dhagaa dhosuu fa’aa humnaan itti fe’aame jiraa .
Midhaan Baratoottaa irraa ga’aa turtee fi ga’aa jirtuu , nuu kan qamaa kenyaa irraa ga’ee mitti ;Adunyaan sobdee cuunfaattuu tun illee qubaa qabdii . Wayyaneen immoo hammenyaa ishee kanaa baratootni Unversity wal ta’uudhaan sagalee isaan dhagessisan jetee waan amanteef kuunis dawwii Pr.BARACK OBAMA , biyyaa Abbaa isaa godhuuttii dabalattaan Tessoo Gamtaa Africa Finfinee jiruu demudhaan , motummoota abba irree Africa hasoofsissaa jechuun dhagahaame . sanaa booda kaa murtiin Hogaantootaa Wayyanee ebbichii Guyyaa tokko akka ta’uu kanmurteese . sabaaba isaa maal akka ta’ee bayyee wal nuu hin gafachuu ta’uu illee ; Gochaa ishee waan bektuuf midhaa Baratoottaa fi ummataa ga’aa jirtuu. Wayyaneen gochaa ishee dursitee kan bekkatee Gamtaan Baratoottaa gaaficha kasuun hin hafuu dhufattii Presedanticha wajjin wal qabatee jetee silaa yadef murtii unversity hunduu guyyaa kanaa akka beffaamani barattoon addaa akka Faffacaa’aan gotee . Presedanticha Hiddaa dhalataa Africa ta’uun abdii bayyee battee kan bishaan lixee ta’uus rakkoo Africa bekkuu waan ta’eef siyaasa ,Guraachootaa Angoo qabutti fayyadamee jijjiraama fidduu jedhame egammuus kan aditii gadii ta’ee muldhaate . Kun kan argisisuu furmataa rakkoo kenyaaf mataa kenyaa malee abdi nama irraa ka’uu dhisnee furmaatni nuu akka ta’ee irraa baraa .
Previous Presdenti Obaamaan Daawwannaa guyyaa lamaaf kenyaa Magaalaa Nairobi galuun isaa bekkeme jira.
Next Seenaa Perezidaanti Barack Hussein Obama Gabaabinaan